Arzantina: Maneho Hevitra Ao Anatin’ny Fanadihadiana Ifarimbonana Amin’ny Teny Frantsay “Hijos” Ireo Ankizy Niharan’ny Jadona · Global Voices teny Malagasy
Arzantina: Maneho Hevitra Ao Anatin'ny Fanadihadiana Ifarimbonana Amin'ny Teny Frantsay “Hijos” Ireo Ankizy Niharan'ny Jadona
Voadika ny 19 Janoary 2018 4:00 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Português, македонски, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 17 Jona 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tao anatin'ny tetikasany fahasivy, nandeha tany Arzantina ny Blogtrotters (bilaogin-dahatsary ifarimbonana Frantsay) mba hanatontosa ny Hijos, fanadihadiana hiombonana momba ny ankizy tsy hita nandritra ny didy jadona ary miezaka ny hanoritsoritra ny niaviany sy ireo ray aman-dreniny izay tsy hita popoka ihany koa.
Ireo gadra tsy hita CC-BY Ha+
Ao amin'ny tranonkalan'ny tetikasa, manazava ny tanjona kasain'ity fanadihadiana antserasera ity ny lahatsary fanokafana :
Nandritra ny dia nankany Arzantina, nanavao matetika ny kaontiny Twitter, ny pejiny facebook, ny sary tao amin'ny Flickr sy ny fitantarana tao anaty lahatsary ao amin'ny tranonkala izy ireo. Naka sary sy nanatontosa horonantsary sy antsafa izy ireo rehefa nanomboka ny fanadihadiana ary naharay fanehoan-kevitra sy soso-kevitra eo noho eo. Niteraka fifanakalozan-kevitra izay namaritra ny torolalana horaisin'ny fanadihadiana izany rehetra izany .
Araka ny nohazavain'izy ireo tao amin'ny tranokalany, nanatsara ny tetikasany sy nanitatra ny lohahevitra ny fifaneraserana tamin'ny mpisera:
Les internautes pourront influencer le processus éditorial. Ils pourront nous suggérer des personnes à voir, des lieux à visiter, ou nous poser des questions. A charge pour nous de hiérarchiser ces apports et d’intégrer cette participation sans nuire à la ligne éditoriale générale.
Handray anjara amin'ny fizotry ny famoahana ny lahatsary ireo mpisera aterineto. Azon'izy ireo atao ny manome soso-kevitra ny olona hovangiana, ny toerana hotsidihana, na hanontany anay. Anjaranay ny mandanjalanja izany fandraisana anjara izany arakaraka ny maha-zava-dehibe azy sy mampiditra ilay fandraisana anjara mba tsy hanimba ny famoahana ny lahatsary amin'ny ankapobeny.
Tany Arzantina ny Blogtrotters ny 9 ka hatramin'ny 22 jona 2010, ary maro ny lahatsary no nalefa tao amin'ny tranokalany, izay nanome safidy amin'ny dikanteny mandeha hoazy ho an'izay tsy mamaky teny frantsay. Mitondra antsika any amin'ny Zaridainan'ny Fahatsiarovana any Arzantina ny iray amin'ireo horonan-tsary, izay ahitana ny anaran'ireo olona niharam-boina an'arivony, miaraka amin'ny taonany tamin'ny fotoana nakana azy ireo an-keriny na ny namonoana azy, nosoratana tamin'ny rindrim-bato izany mba ahafahan'ireo fianakaviany manome voninahitra azy ireo. Eo amin'ny rindrina ambony, ahitana ny soratra hoe: “Ireto ny anaran'ireo niharan'ny fampihorohoroan'ny fanjakana ka nanjavona sy novonoina ary ireo maty raha ny niaro ny idealin'ny rariny sy ny fitovian-jo.”
Nitsidika ny biraon'ny ONG siantifika iray ihany koa ireo bilaogera, izay misahana ny famantarana ny sisa tavela tamin'ny razana hita, ​​mba hanomezana ny filaminan-tsaina ho an'ireo fianakaviana izay niandry am-polo taonany maro mba hamantarana ny toerana nisy ny zanany sy ireo mpiray tampo aminy tsy hita . Tamin'ny fotoana nanoratana, zaza vao teraka miisa 100 tamin'ireo 500 tsy hita rehefa nalaina an-keriny ny ray aman-drenin'izy ireo no nahita indray ny fianakaviany. Ity ny antsafa nataony tao amin'ny lahatsary, tamin'ny teny Anglisy:
Ato anatin'ity antsafa mahaontsa ity dia niresaka tamin'i Ana Maria Careaga izy ireo, izay nalaina an-keriny ihany koa tamin'izy vao 16 taona monja. Navotsotra izy taorian'izay, nandao ny fireneny ary nipetraka tany an-tsesitany. Ny reniny, izay mpikambana tao amin'ny vondron'ny Reny ao amin'ny Kianjan'ny [volana] May , dia nijanona tao Arzantina ary nisy namono rehefa avy namonjy Lamesa tao amin'ny fiangonana Santa Cruz izy.